Ukucanda ukhuko lweCricut
Ukusika ukhuko lweSilhouette
Iphepha lomngxunya wenqindi
Ukubetha kwephepha eliqhelekileyo
Umsebenzi onzima wephepha
Imingxunya yephepha enemingxunya emininzi
Umngxunya wokukhupha ipleyiti
Uhlalutyo lwexesha elizayo lophuhliso lweshishini lokubhala lase China
ngomphathi ku 20-10-22
1. Amagqabantshintshi ophuhliso lweshishini lokubhala Izinto zokubhala zizixhobo ezahlukeneyo ezisetyenziswa ngabantu kwimisebenzi yenkcubeko efana nokufunda, iofisi, nobomi basekhaya. Ngophuhliso oluqhubekayo loqoqosho kunye netekhnoloji, udidi lwezinto zokubhala nazo zihlala zihlaziywa kwaye ziphuhliswa. Ezanamhlanje ...
Uyikhetha njani imethi yokusika elungileyo ngokuqonda ukusetyenziswa kunye neempawu zokusika?
1. Injongo neempawu zomatshini wokusika? Iphedi yokusika sesinye sezixhobo ekufuneka abadlali bemodeli zamaphepha bazixhobise. Imethi yokusika sesinye sezixhobo abadlali bemodeli bamaphepha ekufuneka bezixhobisile: Imethi yokusika iya kukhusela inwebu kwaye yandise ubomi benkonzo; b. Isikethi ...
Kukhuthazo lwejelo kunye nokwakha uphawu kwishishini lokubhala e-China
Ubudlelwane phakathi komenzi kunye nomthengisi buhlala kubudlelwane obulula bokuthengiselana, kwaye la maqela mabini aswele intsebenzo yeqhinga kunye nenqanaba eliphezulu kunye nokunxibelelana. Ngenxa yoko, izibonelelo zala maqela mabini azidibananga kwaye injongo yophawu oluqhelekileyo kwimarike ayinakho ...
IDILESI: No.9, Xinfeng Road, Youjiu Village, Area Wanjiang, Dongguan City, Guangdong kwiPhondo, China